मनोरञ्जन Archives - Page2of2- Radio Tharuhat Your browser does not support the audio element.
Post published:२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०८:४२
पुर्बीथारु भाषाको गीत "चुरी खनखन" को भिडियो छायांकन चाडै प्रारम्भ हुने भएको छ। थारु सुपरस्टार सञ्जु बाबाको शब्द/सँगीत र चर्चित थारु गायिका गीता चौधरी र हरुण रशिदको स्वर रहेको गीतलाई क्वाल बिश्वासले‌ छायांकन गर्ने छन। बिबेक चौधरीको नृत्य निर्देशनमा बन्न लागेको भिडियोमा शुनिल माझी, अनुषा राजधामी र सुष्मा माझीले अभिनय गर्ने‌छन।
Continue Reading “चुरी खनखन” को भिडियो छायांकन चाडै प्रारम्भ हुने..
बारा जिल्लामा बोलिने थारु भाषाको गीत “पागल बना देलौ” को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चर्चित गायिका अनु चौधरी र बारा जिल्लामा उदाउदै गरेको नव-गायक आर्या चौधरीको आवाजमा रहेको गीतलाई हिरा चौधरीले निर्देशन गरेका छन् । बाराका विरु चौधरी र चितवनकी मुस्कान चौधरीको जोडदार अभिनय रहेको यो गीतलाई सन्तकुमार चौधरीले छायांकन गरेका हुन । कोसिष चौधरीको शव्द रहेको यो गीतलाई गणेश चौधरीले एरेन्ज गरेका छन् । ड्रिम्स स्टुडियो काठमाण्डौंमा यो गीत रेकर्ड गरिएको हो । गीतमा १२ जना स्थानीय थारु चेलीहरुलाई कोरसको रुपमा राखेर नचाईएको छ। यो गीतमा विक्रम चौधरी ( म्याड म्याक्स)ले ड्रोन अपरेट गरेका छन भने सहायक क्यामेरामा सन्ज चौधरीले काम गरेका छन् । अजय चौधरीले सहायक कोरियोग्राफी गरेको यो गीतले दर्शकको मन जित्न सक्ने निर्देशक हिरा चौधरीले बताए । यो गीतलाई निराजन थारु र सन्तोष शाहले निर्माण गरेका हुन्। भिडियो हेर्नुहोस्। https://m.youtube.com/watch?v=ETNoDuU9Q_o&app=m&persist_app=1
Continue Reading बारा जिल्लाको थारु गीत “पागल बना देलौ” को भिडियो सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
बारा जिल्लाको थारु गीत “पागल बना देलौ” को छायांकन समापन
Post published:२०७७ कार्तिक २४, सोमबार १९:१६
बारा जिल्लामा बोलिने थारु भाषाको गीत "पागल बना देलौ" को म्यूजिक भिडियो छायांकन चितवनको रत्ननगरमा समापन गरिएको छ । रत्ननगर स्थित होटल स्टार ब्यान्क्यूटमा सेट बनाएर २ दिन सम्म छायांकन गरिएको थियो । चर्चित गायिका अनु चौधरी र बारा जिल्लामा उदाउदै गरेको नव-गायक आर्या चौधरीको आवाजमा रहेको गीतलाई हिरा चौधरीले निर्देशन गरेका छन् । मोडेल- मुस्कान चौधरी बाराका विरु चौधरी र चितवनकी मुस्कान चौधरीको जोडदार अभिनय रहेको यो गीतलाई सन्तकुमार चौधरीले छायांकन गरेका हुन । कोसिष चौधरीको शव्द रहेको यो गीतलाई गणेश चौधरीले एरेन्ज गरेका छन् । ड्रिम्स स्टुडियो काठमाण्डौंमा यो गीत रेकर्ड गरिएको हो । गीतमा १२ जना स्थानीय थारु चेलीहरुलाई कोरसको रुपमा राखेर नचाईएको छ । मोडेल- बिरु चौधरी यो गीतमा विक्रम चौधरी ( म्याड म्याक्स)ले ड्रोन अपरेट गरेका छन भने सहायक क्यामेरामा सन्ज चौधरीले काम गरेका छन् । अजय चौधरीले सहायक कोरियोग्राफी गरेको यो गीतले दर्शकको…
Continue Reading बारा जिल्लाको थारु गीत “पागल बना देलौ” को छायांकन समापन
“तोर मायाक सागरमा” थारु गीतको भिडियो सार्वजनिक!
Post published:२०७७ कार्तिक १०, सोमबार ०७:३९
चितवनका चर्चित गायक मनोज महतो र अहिलेको चर्चित गायिका अन्नु चौधरीको स्वरमा रहेको ‘तोर मायाक सागरमा’ बोलको थारु गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । हिरा चौधरीको शब्द तथा मनोज महतोको संगीत र स्वर रहेको गीतमा अहिलेको चर्चित गायिका अनु चौधरीले साथ दिएकी हुन् भने उक्त गीतमा देब महतो र नायिका स्रिस्टी खड्काको अभिनय रहेको छ । दशैंको अवसर पारेर धमाधम थारु म्युजिक भिडियो गितहरु युट्युवमा सार्वजनिक भईरहेको बेला चितवनका गायक महतोले उक्त गित ND Studio The Story Maker युट्युब च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरेका हुन्। यस गीतको छायांकन चितवनको पर्यटकीय स्थल सौराहा तथा नारायणी नदी सँगै चिया खेतीको लागि प्रसिद्ध मानिने ईलामको चिया बगानमा छायांकन भएको निर्देशक हिरा चौधरीले बताए। भिडियो हेर्नुहोस्! https://youtu.be/xIfkiVrvypg
Continue Reading “तोर मायाक सागरमा” थारु गीतको भिडियो सार्वजनिक!
“तिम्रो अनुपम रुप हेर्दा”को छायांकन हुँदै (फोटो फिचर सहित)
Post published:२०७७ आश्विन १९, सोमबार ०६:१९
गायक पंकज चौधरीको सुमधुर स्वर र देवकुमार चौधरीको संगीत रहेको एकदमै मीठो गित "तिम्रो अनुपम रुप हेर्दा" को भिडियो छायांकन भइरहेको छ। आसिम खानको अडियो निर्माण रहेको सो गीतमा थारु सुपरस्टार सञ्जु बाबा, गोपिनी सापकोटा र जिवन राईको अभिनय रहेको छ। यो गीतको म्युजिक भिडियो आउने दशैंमा रिलिज हुने थारु सुपरस्टार सञ्जु बाबाले जानकारी दिनुभयो। फोटो फिचरहरु...
Continue Reading “तिम्रो अनुपम रुप हेर्दा”को छायांकन हुँदै (फोटो फिचर सहित)
मेलिना राई र सत्य प्रकाश लिम्बुको “माया सुस्तरी” गितको भिडियो सार्बजानिक
Post published:२०७७ आश्विन ५, सोमबार १९:५१
असोज ५ / मेलिना राई र सत्य प्रकाश लिम्बुको आवाज रहेको मीठो गित माया सुस्तरी गितको भिडियो पबित्र टिभी युट्युब च्यानलबाट सार्बजानिक भएको छ। राजा माबो को शब्द लाई बिनोद खम्बुले मीठो सङ्गीत भरेका छन भने चन्दु गोर्खाली ले एरेन्ज गरेका छन।प्रबासको ब्यस्त समयलाई सदुपयोग गरि निर्देशक जीवन राईले भिडियो निर्माण गरेका छन। मलेसियामा शुटिङ्ग गरिएको यो भिडियोलाई जीवन राईले निर्देशन तथा कोरियोग्राफ गरेका छन। जीवन राई र सुशिला तामाङ्ग को दम्दार अभिनय रहेको छ भने रुद्र तामाङ्ग ले क्यामेरा र ड्रोन चलाएका छन साथै राजिभ बलामिले भिडियो सम्पादन गरि मिलन गुरुङ्ग ले रङ्ग भरेका छन। https://youtu.be/BhqZ9cxojTU
Continue Reading मेलिना राई र सत्य प्रकाश लिम्बुको “माया सुस्तरी” गितको भिडियो सार्बजानिक
”चिमरैतनी चिम रैतानी ” थारु म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
Post published:२०७७ आश्विन २, शुक्रबार ०९:१९
पुर्बी तराइमा एक समय अध्याधिक गति लिएको थारु संगीत क्षेत्र केहि बर्ष यता सुस्ताएको थियो । पश्चिम क्षेत्रका थारु म्युजिक भिडियो तिव्र गतिमा अगाडि बढिरहदा फेरी पूर्वी क्षेत्रमा थारु संगीतकर्मीहरु गति लिन तयारि गरिरहेका छन् । यसै बीच बर्जु मिडियाको प्रस्तुतिमा” चिमरैतनी चिम रैतानी ” थारु म्युजिक भिडियो आज रिलिज भएको छ । म्युजिक भिडियोमा चर्चित गायिका अनुमा चौधरी र गायक राजकुमार चौधरीले स्वर दिनु भएको छ । अजयदीप चौधरीको शब्द रहेको म्युजिक भिडियोमा संगीत पनि गायक राजकुमार चौधरीकै रहेको छ । म्युजिक भिडियोमा अभिनय राजकुमार चौधरी र यशोधा भगतको रहेको छ । भिडियो हेर्नुहोस्! https://youtu.be/YcnQTnu-8sQ
Continue Reading ”चिमरैतनी चिम रैतानी ” थारु म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
सुपरस्टार सन्जु बाबा द्वारा अभिनित थारु गीत “त्या कर्लै कहेन”को म्युजिक भिडियो आउँदै—
Post published:२०७७ भाद्र २३, मंगलवार ०६:५९
थारु सुपर स्टार 'सञ्जु बाबा' को अभिनय रहेको पुर्बेली थारु भाषाको गीत "त्या कर्लै कहेन" को म्युजिक भिडियो बजारमा आउँन लागेको छ देवकुमार विश्वासको शब्द/संगीत रहेको गीतमा कासिन चौधरीले स्वर दिएका हुन्। जिवन राईको नृत्य निर्देशनमा बन्न लागेको म्युजिक भिडियोमा थारु सुपर स्टार सञ्जु बाबासँगै गोपिनी सापकोटा र सुमन पौडेललाई पनि देख्न सकिन्छ।
Continue Reading सुपरस्टार सन्जु बाबा द्वारा अभिनित थारु गीत “त्या कर्लै कहेन”को म्युजिक भिडियो आउँदै—